သစ္စာအလင်း: Permaculture (5)
မူရငျး အဓိပ်ပါယျ ၊ သယံဇာတ ကနျ့သတျမှု နှငျ့ Peak Oil Theory
ပါမာကပျလျခြား လို့ အသံထှကျ တဲ့ ဒီအင်ျဂလိပျစကားလုံး ကို စိုကျပြိုးရေးဘှဲ့ ရဖွဈတဲ့ ကြှနျမ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျ ခဲ့သညျမှာ မကွာသေးပါ..။
Culture = Agriculture ဆိုတဲ့ စကားလုံး (၂) လုံးပေါငျးစပျထားတာ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ…။
မွနျမာ လို ပွနျကွတဲ့အခါ ကြှနျမတို့ဆရာ ဦးသိနျးဆုက အခွတေကြဥယြာဉျခွံစိုကျပြိုးရေး လို့ ဆီလြျောစှာဘာသာပွနျပေးထားပါတယျ..။
ကြှနျမတို့ ယနေ့ စိုကျပြိုးလုပျဆောငျကွတဲ့ စိုကျပြိုးရေး မှာ မွေ ကိုသီးနှံတဈရာသီအသုံးခြ လိုကျ၊ ရျိတျသိမျးလိုကျ ၊ပွနျထှနျယကျလိုကျ လုပျကွတဲ့ လယျစိုကျပြိုးရေး၊ ယာသီးနှံ (ပဲ၊ပွောငျး၊နှမျး၊ ဝါ၊ ဂုံလေြျှာ ၊) စတဲ့ သီးနှံတှေ မပါသလို နားလညျကွတာမြားပါတယျ..။
ကြှနျမတို့ စိုကျပြိုးရေးတက်ကသိုလျ ၊စိုကျပြိုးရသေိပ်ပံ တှေ မှာ ဘာစာရပျခှဲကွတဲ့အခါ မှာ လညျး၊ လယျယာသီးနှံ စိုကျပြိုးရေး၊ နှဈရှညျ သီးနှံစိုကျပြိုးရေး၊ စကျမှုကုနျကွမျးသီးနှံစိုကျပြိုးရေး ၊ ဥယြာဉျခွံ သီးနှံစိုကျပြိုးရေး ဆိုပွီး သီးနှံမြားကို အုပျစု ခှဲခွားကာ နညျးပညာကလညျးကှဲပွားသလို ဖွဈရပါတယျ…။
Permaculture ရဲ့ အခွခေံ မူဝါဒတှကေိုရှငျးပွတိုငျး ခှဲခွား စိုကျပြိုးတတျတဲ့ ကြှနျမတို့တောငျသူတှကေ လကျမခံတတျပါဘူး..။ ဆရာမ ပွောသလို ဆို ဥယြာဉျခွံ ကွီးကွီး စိုကျမှ ဒီလိုကငျြ့သုံးနိုငျပါမယျ ..။ လယျ နဲ့ယာ မှာ ဆို ဒီစနဈ လုပျလို့မရဘူး လို့ ပဲ ပွောလရှေိ့တတျပါတယျ..။
Conventional Agriculture( တဈကှငျးတဈစပျတဈပွနျ့တဈပွော သီးနှံ တဈမြိုးတညျးစိုကျပြိုးခွငျး) နဲ့ ဓာတျမွသွေဇာ၊ ပိုးသတျဆေး ၊ပေါငျးသတျဆေး၊ မှိုသတျဆေး ၊လောငျစာဆီမြားစှာ သုံးစှဲ ပွီး အထှကျကိုရှရှေု့ လုပျဆောငျ တဲ့ ကာ က လညျး မှနျမွတျတဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ ပါ..။ တိုးလာတဲ့ ပါးစပျပေါကျ တှကေို ဝလငျအောငျကြှေးမှေးဘို့ အထှကျတိုးမှ ဖွဈမယျ …။ဒါကွောငျ့ ဒီသတျဆေးတှေ သုံးတာ တရားတယျ၊လုပျသငျ့တယျ ဆိုတဲ့ ခံယူခကျြနဲ့ စိုကျပြိုးတဲ့ ကာလတှကွောခဲ့ပါပွီ..။
Monoculture လို့ချေါတဲ့ သီးနှံ တဈမြိုး တညျးကို တဈကှငျးတဈစပျ ထဲ စိုကျပြိုးတဲ့စနဈဟာ ပွငျပ သှငျးအားစု မြားစှာ ကို အသုံးပွုရပါတယျ။ ပိုးကြ ရငျကသြလို..ရောဂါကရြငျကသြလို တောငျသူတှဟော ဝငျငှေ အဆုံးရှုံးမခံ လိုကွတာနဲ့ ဓာတု ဆေးမြားစှာ ကိုအသုံးပွုကွပါတယျ..။
အဲဒီအခါ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး မှာ အဓိက အရေးကွီး တဲ့ ဇီဝ မြိုးကှဲကွှယျဝမှု ကို ဆိုးရှားစှာ ထိခိုကျပါတော့တယျ..။ တကယျလို့ သွဂဲနဈ စိုကျပြိုးရေး ကိုကငျြ့သုံးခဲ့မယျ ဆိုရငျတောငျမှပဲ..သီးနှံ တဈမြိုးတညျးတကှငျးတဈစပျထဲ အားပွု စိုကျပြိုး ရေး မှာ သွဂဲနဈ သှငျးအားစု မြားစှာ အသုံပွု ရမှာ အမှနျပါပဲ။
ကမြ တို့ နမူနာ ပွု ရမဲ့ စိုကျပြိုးသဘာဝ ပတျဝနျးကငျြကတော့ သဘာဝ သဈတော ရဲ့ ဝနျးကငျြဖွဈပါတယျ..။ သဘာဝ သဈတောထဲမှာ မှီတငျးနထေိုငျကွတဲ့ သကျရှိ တှဟော အခငျြးခငျြး ညီညှတျမြှတစှာနထေိုငျကွတယျ..။ မြိုးစိတျတဈခု ကစှနျ့ထုတျတာ ဟာနောကျမြိုးစိတျ တဈခု အတှကျ လိုအပျလို့ သုံးစှဲ ရမဲ့အရာဖွဈနေ တတျပါတယျ..။
သို့သျောလညျး ကမ်ဘာ့စိုကျပြိုးမွေ ရဲ့ ၉ ၀% ဖွဈတဲ့ မွဧေက သနျး ၁၅၀၀ ဟာ Monoculture လို့ချေါတဲ့ သီးနှံတဈမြိုးတညျးကို စိုကျပြိုးပွီး စိုကျပြိုးရေးအခွခေံတဲ့ စကျမှု လုပျငနျး အထောကျအကူပွု တဲ့မွနေရောတှေ ဖွဈနပေါတယျ.။
မြားပွားလှစှာသောသှငျးအားစုတှကေိုလညျးအလြှံပယျ သုံးစှဲနကွေပါတယျ။ တဈကမ်ဘာ လုံးစားရရေိက်ခာ ထုတျလုပျမှုကို အားလုံး အနနေဲ့ ခွုံငုံကွညျ့မယျ ဆိုလြှငျ ကောကျပဲသီးနှံ၁၂ မြိုးနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ၂၃ မြိုးကိုသာ အမှီပွု စားသုံးနကွေရပါတယျ။
Monoculture လို့ချေါတဲ့ သီးနှံတဈမြိုးတညျးကို စိုကျပြိုးခွငျးဟာ ပိုးမှား ၊ ရောဂါ ကိုလကျယပျဖိတျချေါ သလို ဖွဈပွီး စိုကျခငျးထဲမှာ စှဲမွဲစပေါတယျ။ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှုကို ပါ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိစပွေီး အိန်ဒိယ နဲ့ အိုငျယာလနျ နိုငျငံသမိုငျးတှမှော အကွီးအကယျြ ငတျမှတျခေါငျးပါးမှု ဖွဈစတေဲ့သမိုငျးကွောငျးတှရှေိခဲ့ဘူးပါတယျ..။
ကမ်ဘာ့လူထုကိုကြှေးမှေး ခငျြလို့ ဒီလို ဆေးတှေ သုံးစိုကျရတာပါဆိုရငျ..သူတို့ရဲ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကွောငျ့ ဝလငျအောငျ မကြှေးမှေးနိုငျတော့ မဲ့ အနအေထားကို မှနျးဆ ကွညျ့လို့ရနပေါပွီ..။
သိပ်ပံပညာရှငျ အိုငျးစတိုငျးက ပွောဘူးတယျ ကမ်ဘာမှာ ပြားမြိုးစိတျပြောကျကှယျ သှားပွီးရငျ လူသားမြိုးနှယျ ပြောကျဆုံး ဘို့က နောကျထပျ၎နှဈ ပဲခံ ပါလိမျ့မယျ တဲ့..။ထိုဇီဝမြိုးကှဲ တှကေို ထိနျးသိမျးဘို့..ဆိုတာ အရေးကွီး လှပါတယျ..။
မွနျမာက ငါးပညာရှငျ တှကေတော့ပွောဘူးတယျ..။ တောငျသူတှေ ပေါငျးသတျဆေး သာ ဆကျလကျသုံးစှဲနမေယျ ဆိုရငျ မွနျမာ့ရခြေိုငါး မြိုးတုံးပြောကျကှယျ သှား နိုငျတယျ လို့ဆိုပါတယျ..။
တောငျပျေါရဝေရေလှေဲ ဒသေ တှမှော သဈပငျ တှေ ခုတျခွငျး၊ တောငျယာမီးရှို့ခွငျး ဆိုတာကလညျး မွပွေနျ့ ကစိုကျပြိုးရေး အတှကျရကွေီးတာ…မိုးခေါငျ တာ တှအေဖွဈ ဆကျစပျ ပတျသကျနရေပွနျပါတယျ..။
နောကျတဈခု က လူတိုငျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့လောငျစာ ကိစ်စ၊ ကြှနျမတို့ စိုကျပြိုးရေး မှာ ရေ က အသကျပါ ရမေရှိရငျ ဘာမှ စိုကျပြိုးလို့ မရပါဘူး..။ မွအေောကျရေ ဖွဈဖွဈ၊ မွဈရတေငျ ဘို့ပဲဖွဈဖွဈ လောငျစာဆီတှေ အသုံးပွုရပါတယျ..။
ကြှနျမ ရဲ့ အတှအေ့ကွုံ အရ ဟငျးသီးဟငျးရှကျစိုကျတောငျသူတှေ ကို အငျတာဗြူးကွညျ့တဲ့အခါ ဒီဇယျ ဆီ ဘိုးစရိတျဟာ ပိုးသတျဆေး၊ ပေါငျးသတျဆေး၊ဓာတျမွသွေဇာ ၊ မြိုးစေ့ ဘိုးတှလေို တနျးတူ လညျဂုတျခှစီးသလို ဝနျတာပိနစေေ တာကို ကွားသိရဘူး ပါတယျ..။
ဒေးဗဈ နဲ့ ဆရာဘီလျ ဟာ Permaculture အကွောငျး စတငျခဲ့စဉျက ၁၉ ၇၀ ခုနှဈလောကျ
မှာ စှမျးအငျ နဲ့ ပတျသကျပွီး ရှားပါးမှု ဒုက်ခ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာ ကို သိသိမှတျမှတျခံစား ခဲ့ရတယျ..။
စိုကျပြိုးရေး ကအသုံးပွု တဲ့ သဘာဝ အရငျးအမွဈတှေ ဟာ အကနျ့အသတျမြှသာရှိတယျ ..။ ပွနျလညျ ပွညျ့ဖွိုး မနဘေူး..။ တနေ့ မှာ ကုနျခမျးသှားမယျ ဆိုတော့ဘယျလို လုပျကွမလဲ ဆိုတာကိုလေးလေးနကျနကျ စဉျးစားပါတယျ..။
ရရှေညျ တညျတံ့ တာထကျပိုတဲ့ အရငျလို စိမျးစိုလနျးဆနျးတဲ့ကမ်ဘာကွီး ကိုပွနျလညျ ဖနျတီး ဘို့ စိုကျပြိုးနညျးဟာ အရေးကွီး ခဲ့ပွီ..။
ရရှေညျ တညျတံ့ ခွငျး ဆိုတဲ့ ရညျရှယျ ခကျြနဲ့ ဆောငျရှကျကွမယျ ဆိုလငျြ ယနမြေို့းဆကျတှအေတှကျ လတျတလော စဉျးစား တာ ဖွဈပွီး နောငျလာ နောကျသားတှအေတှကျ ခနျြရဈမဲ့ အမှေ….သယံဇာတ အမှေ…. ဖွဈဘို့ ထပျမံစဉျးစားစခေငျြတဲ့ နညျးစနဈလညျးဖွဈပါတယျ..။
စှမျးအငျလောငျစာ တှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး Peak oil ဆိုတဲ့ အယူအဆ ကို ဘူမိရူပဗဒေပညာရှငျ Marion King Hubbert က စတငျ ပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ..။ ကမ်ဘာ ရဲ့ ရနေံထုတျလုပျမှု ကိနျးဂဏနျး တှကေို Graph ဆှဲ မယျ ဆိုရငျ ခေါငျးလောငျးပုံ ကှေးကှေးကှေးကှေးလေဲးဖွဈပျေါနတောဖွဈတယျ။
အမွငျ့ဆုံး ထုတျလုပျနိုငျတဲ့နှဈဟာ ၂၀၀၀ ဖွဈတယျ ..ဆကျလကျပွီးကဆြငျးနတေယျ လို့သူကဆိုပါတယျ…။ ဒီသော့ခကျြဟာ ကမ်ဘာ ပျေါရှိလူထုတှေ ရဲ့ လူနမှေု ဘဝတှကေို ထိခိုကျ လာမယျ ဆိုတာ လညျးပါဝငျ တယျ..။ Hubbert ကအမွငျ့ဆုံးသောရနေံသညျရနေံထုတျလုပျမှုအမြားဆုံးနှုနျးကို ရကျေရှိ ပွီး ကာ မှ စတငျကဆြငျးလာသညျ့အခကျြတဈခကျြဖွငျ့ Peak Oil Theory ကို ထုတျဖျေါ ခဲ့ပါတယျ..။
ရနေံအမွငျ့ဆုံးရောကျရှိခြိနျတှငျ ရနေံတှငျး အသဈမြားရှာဖှတှေရှေိ့မှုသညျလကျရှိတှငျး မြားရဲ့ ထုတျလုပျမှု ကဆြငျးခွငျးနှငျ့အမီလိုကျနိုငျ အုံးမညျမဟုတျပါ ။
ယနေ့ စိုကျပြိုးရေးနညျးစနဈမြားအတှကျ ရနေံနှငျ့သဘာဝဓာတျငှသေ့ညျမရှိမဖွဈလိုအပျသောကွောငျ့ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာရနေံတငျပို့မှုကဆြငျးခွငျးသညျလာမညျ့ဆယျစုနှဈမြားအတှငျးစားနပျရိက်ခာဈေးနှုနျးမြားနှငျ့မကွုံစဖူးအစာခေါငျးပါးခွငျးမြားကိုဖွဈပျေါစနေိုငျတယျ ဆိုတာ ကိုလညျး ခနျ့မှနျး ထား ခဲ့ပါတယျ..။
တိုးလာမဲ့ပါးစပျပေါကျ တှအေတှကျ သီးနှံအထှကျနှုနျးတှေ တိုးရမယျ …. ရှိသမြှ ဆေးတှသေုံးပါ။ အထှကျနှုနျးသညျ အဓိက ( Production Oriented Agriculture) က တညျမှီခဲ့သော အခကျြသုံးခကျြဖွဈတဲ့..ရေ နှငျ့စှမျးအငျသညျ ထိုသို့ ပွောငျးလဲခဲ့ပါပွီ..။
တတိယအခကျြကတော့ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲခွငျး ပါ…။
ထို သို့အကွောငျးမြားစှာကို ကွိုတငျစဉျးစားပွီး မှPermaculture ရဲ့ အခွခေံမူဝါဒမြားခမြှတျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ..။
မူရင်း အဓိပ္ပါယ် ၊ သယံဇာတ ကန့်သတ်မှု နှင့် Peak Oil Theory
ပါမာကပ်လ်ချား လို့ အသံထွက် တဲ့ ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံး ကို စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ ရဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ခဲ့သည်မှာ မကြာသေးပါ..။
Culture = Agriculture ဆိုတဲ့ စကားလုံး (၂) လုံးပေါင်းစပ်ထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…။
မြန်မာ လို ပြန်ကြတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ဆရာ ဦးသိန်းဆုက အခြေတကျဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေး လို့ ဆီလျော်စွာဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်..။
ကျွန်မတို့ ယနေ့ စိုက်ပျိုးလုပ်ဆောင်ကြတဲ့ စိုက်ပျိုးရေး မှာ မြေ ကိုသီးနှံတစ်ရာသီအသုံးချ လိုက်၊ ရ်ိတ်သိမ်းလိုက် ၊ပြန်ထွန်ယက်လိုက် လုပ်ကြတဲ့ လယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ ယာသီးနှံ (ပဲ၊ပြောင်း၊နှမ်း၊ ဝါ၊ ဂုံလျှော် ၊) စတဲ့ သီးနှံတွေ မပါသလို နားလည်ကြတာများပါတယ်..။
ကျွန်မတို့ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၊စိုက်ပျိုးရေသိပ္ပံ တွေ မှာ ဘာစာရပ်ခွဲကြတဲ့အခါ မှာ လည်း၊ လယ်ယာသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေး၊ နှစ်ရှည် သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံစိုက်ပျိုးရေး ၊ ဥယျာဉ်ခြံ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး ဆိုပြီး သီးနှံများကို အုပ်စု ခွဲခြားကာ နည်းပညာကလည်းကွဲပြားသလို ဖြစ်ရပါတယ်…။
Permaculture ရဲ့ အခြေခံ မူဝါဒတွေကိုရှင်းပြတိုင်း ခွဲခြား စိုက်ပျိုးတတ်တဲ့ ကျွန်မတို့တောင်သူတွေက လက်မခံတတ်ပါဘူး..။ ဆရာမ ပြောသလို ဆို ဥယျာဉ်ခြံ ကြီးကြီး စိုက်မှ ဒီလိုကျင့်သုံးနိုင်ပါမယ် ..။ လယ် နဲ့ယာ မှာ ဆို ဒီစနစ် လုပ်လို့မရဘူး လို့ ပဲ ပြောလေ့ရှိတတ်ပါတယ်..။
Conventional Agriculture( တစ်ကွင်းတစ်စပ်တစ်ပြန့်တစ်ပြော သီးနှံ တစ်မျိုးတည်းစိုက်ပျိုးခြင်း) နဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး ၊ပေါင်းသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေး ၊လောင်စာဆီများစွာ သုံးစွဲ ပြီး အထွက်ကိုရှေ့ရှု လုပ်ဆောင် တဲ့ ကာ က လည်း မွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါ..။ တိုးလာတဲ့ ပါးစပ်ပေါက် တွေကို ဝလင်အောင်ကျွေးမွေးဘို့ အထွက်တိုးမှ ဖြစ်မယ် …။ဒါကြောင့် ဒီသတ်ဆေးတွေ သုံးတာ တရားတယ်၊လုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ စိုက်ပျိုးတဲ့ ကာလတွေကြာခဲ့ပါပြီ..။
Monoculture လို့ခေါ်တဲ့ သီးနှံ တစ်မျိုး တည်းကို တစ်ကွင်းတစ်စပ် ထဲ စိုက်ပျိုးတဲ့စနစ်ဟာ ပြင်ပ သွင်းအားစု များစွာ ကို အသုံးပြုရပါတယ်။ ပိုးကျ ရင်ကျသလို..ရောဂါကျရင်ကျသလို တောင်သူတွေဟာ ဝင်ငွေ အဆုံးရှုံးမခံ လိုကြတာနဲ့ ဓာတု ဆေးများစွာ ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်..။
အဲဒီအခါ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး မှာ အဓိက အရေးကြီး တဲ့ ဇီဝ မျိုးကွဲကြွယ်ဝမှု ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပါတော့တယ်..။ တကယ်လို့ သြဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး ကိုကျင့်သုံးခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင်မှပဲ..သီးနှံ တစ်မျိုးတည်းတကွင်းတစ်စပ်ထဲ အားပြု စိုက်ပျိုး ရေး မှာ သြဂဲနစ် သွင်းအားစု များစွာ အသုံပြု ရမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကျမ တို့ နမူနာ ပြု ရမဲ့ စိုက်ပျိုးသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ သဘာဝ သစ်တော ရဲ့ ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်..။ သဘာဝ သစ်တောထဲမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ သက်ရှိ တွေဟာ အချင်းချင်း ညီညွတ်မျှတစွာနေထိုင်ကြတယ်..။ မျိုးစိတ်တစ်ခု ကစွန့်ထုတ်တာ ဟာနောက်မျိုးစိတ် တစ်ခု အတွက် လိုအပ်လို့ သုံးစွဲ ရမဲ့အရာဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်..။
သို့သော်လည်း ကမ္ဘာ့စိုက်ပျိုးမြေ ရဲ့ ၉ ၀% ဖြစ်တဲ့ မြေဧက သန်း ၁၅၀၀ ဟာ Monoculture လို့ခေါ်တဲ့ သီးနှံတစ်မျိုးတည်းကို စိုက်ပျိုးပြီး စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတဲ့ စက်မှု လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု တဲ့မြေနေရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်.။
များပြားလှစွာသောသွင်းအားစုတွေကိုလည်းအလျှံပယ် သုံးစွဲနေကြပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာ လုံးစားရေရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှုကို အားလုံး အနေနဲ့ ခြုံငုံကြည့်မယ် ဆိုလျှင် ကောက်ပဲသီးနှံ၁၂ မျိုးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၂၃ မျိုးကိုသာ အမှီပြု စားသုံးနေကြရပါတယ်။
Monoculture လို့ခေါ်တဲ့ သီးနှံတစ်မျိုးတည်းကို စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ပိုးမွှား ၊ ရောဂါ ကိုလက်ယပ်ဖိတ်ခေါ် သလို ဖြစ်ပြီး စိုက်ခင်းထဲမှာ စွဲမြဲစေပါတယ်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပြီး အိန္ဒိယ နဲ့ အိုင်ယာလန် နိုင်ငံသမိုင်းတွေမှာ အကြီးအကျယ် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ဖြစ်စေတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ကမ္ဘာ့လူထုကိုကျွေးမွေး ချင်လို့ ဒီလို ဆေးတွေ သုံးစိုက်ရတာပါဆိုရင်..သူတို့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် ဝလင်အောင် မကျွေးမွေးနိုင်တော့ မဲ့ အနေအထားကို မှန်းဆ ကြည့်လို့ရနေပါပြီ..။
သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းက ပြောဘူးတယ် ကမ္ဘာမှာ ပျားမျိုးစိတ်ပျောက်ကွယ် သွားပြီးရင် လူသားမျိုးနွယ် ပျောက်ဆုံး ဘို့က နောက်ထပ်၎နှစ် ပဲခံ ပါလိမ့်မယ် တဲ့..။ထိုဇီဝမျိုးကွဲ တွေကို ထိန်းသိမ်းဘို့..ဆိုတာ အရေးကြီး လှပါတယ်..။
မြန်မာက ငါးပညာရှင် တွေကတော့ပြောဘူးတယ်..။ တောင်သူတွေ ပေါင်းသတ်ဆေး သာ ဆက်လက်သုံးစွဲနေမယ် ဆိုရင် မြန်မာ့ရေချိုငါး မျိုးတုံးပျောက်ကွယ် သွား နိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ်..။
တောင်ပေါ်ရေဝေရေလွဲ ဒေသ တွေမှာ သစ်ပင် တွေ ခုတ်ခြင်း၊ တောင်ယာမီးရှို့ခြင်း ဆိုတာကလည်း မြေပြန့် ကစိုက်ပျိုးရေး အတွက်ရေကြီးတာ…မိုးခေါင် တာ တွေအဖြစ် ဆက်စပ် ပတ်သက်နေရပြန်ပါတယ်..။
နောက်တစ်ခု က လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့လောင်စာ ကိစ္စ၊ ကျွန်မတို့ စိုက်ပျိုးရေး မှာ ရေ က အသက်ပါ ရေမရှိရင် ဘာမှ စိုက်ပျိုးလို့ မရပါဘူး..။ မြေအောက်ရေ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြစ်ရေတင် ဘို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လောင်စာဆီတွေ အသုံးပြုရပါတယ်..။
ကျွန်မ ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အရ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်တောင်သူတွေ ကို အင်တာဗျူးကြည့်တဲ့အခါ ဒီဇယ် ဆီ ဘိုးစရိတ်ဟာ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး၊ဓာတ်မြေသြဇာ ၊ မျိုးစေ့ ဘိုးတွေလို တန်းတူ လည်ဂုတ်ခွစီးသလို ဝန်တာပိနေစေ တာကို ကြားသိရဘူး ပါတယ်..။
ဒေးဗစ် နဲ့ ဆရာဘီလ် ဟာ Permaculture အကြောင်း စတင်ခဲ့စဉ်က ၁၉ ၇၀ ခုနှစ်လောက်
မှာ စွမ်းအင် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှားပါးမှု ဒုက္ခ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ ကို သိသိမှတ်မှတ်ခံစား ခဲ့ရတယ်..။
စိုက်ပျိုးရေး ကအသုံးပြု တဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေ ဟာ အကန့်အသတ်မျှသာရှိတယ် ..။ ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုး မနေဘူး..။ တနေ့ မှာ ကုန်ခမ်းသွားမယ် ဆိုတော့ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပါတယ်..။
ရေရှည် တည်တံ့ တာထက်ပိုတဲ့ အရင်လို စိမ်းစိုလန်းဆန်းတဲ့ကမ္ဘာကြီး ကိုပြန်လည် ဖန်တီး ဘို့ စိုက်ပျိုးနည်းဟာ အရေးကြီး ခဲ့ပြီ..။
ရေရှည် တည်တံ့ ခြင်း ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ကြမယ် ဆိုလျင် ယနေ့မျိုးဆက်တွေအတွက် လတ်တလော စဉ်းစား တာ ဖြစ်ပြီး နောင်လာ နောက်သားတွေအတွက် ချန်ရစ်မဲ့ အမွေ….သယံဇာတ အမွေ…. ဖြစ်ဘို့ ထပ်မံစဉ်းစားစေချင်တဲ့ နည်းစနစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်..။
စွမ်းအင်လောင်စာ တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Peak oil ဆိုတဲ့ အယူအဆ ကို ဘူမိရူပဗေဒပညာရှင် Marion King Hubbert က စတင် ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ကမ္ဘာ ရဲ့ ရေနံထုတ်လုပ်မှု ကိန်းဂဏန်း တွေကို Graph ဆွဲ မယ် ဆိုရင် ခေါင်းလောင်းပုံ ကွေးကွေးကွေးကွေးလေဲးဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်။
အမြင့်ဆုံး ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နှစ်ဟာ ၂၀၀၀ ဖြစ်တယ် ..ဆက်လက်ပြီးကျဆင်းနေတယ် လို့သူကဆိုပါတယ်…။ ဒီသော့ချက်ဟာ ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိလူထုတွေ ရဲ့ လူနေမှု ဘဝတွေကို ထိခိုက် လာမယ် ဆိုတာ လည်းပါဝင် တယ်..။ Hubbert ကအမြင့်ဆုံးသောရေနံသည်ရေနံထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနှုန်းကို ရေက်ရှိ ပြီး ကာ မှ စတင်ကျဆင်းလာသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြင့် Peak Oil Theory ကို ထုတ်ဖေါ် ခဲ့ပါတယ်..။
ရေနံအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိချိန်တွင် ရေနံတွင်း အသစ်များရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်လက်ရှိတွင်း များရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းခြင်းနှင့်အမီလိုက်နိုင် အုံးမည်မဟုတ်ပါ ။
ယနေ့ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များအတွက် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံတင်ပို့မှုကျဆင်းခြင်းသည်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းစားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းများနှင့်မကြုံစဖူးအစာခေါင်းပါးခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ် ဆိုတာ ကိုလည်း ခန့်မှန်း ထား ခဲ့ပါတယ်..။
တိုးလာမဲ့ပါးစပ်ပေါက် တွေအတွက် သီးနှံအထွက်နှုန်းတွေ တိုးရမယ် …. ရှိသမျှ ဆေးတွေသုံးပါ။ အထွက်နှုန်းသည် အဓိက ( Production Oriented Agriculture) က တည်မှီခဲ့သော အချက်သုံးချက်ဖြစ်တဲ့..ရေ နှင့်စွမ်းအင်သည် ထိုသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ..။
တတိယအချက်ကတော့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း ပါ…။
ထို သို့အကြောင်းများစွာကို ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး မှPermaculture ရဲ့ အခြေခံမူဝါဒများချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:48 AM